Baankiin Biyyoolessa Itoophiyaa boordii Bankii Hojii Gamtaa Oromiyaa haarawaan bakka buuse -
Baankiin Biyyoolessa Itoophiyaa boordii Bankii Hojii Gamtaa Oromiyaa haarawaan bakka buuse
Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Adoolessa 2015 keessa sadarkaa idil-addunyaatti badhaasa gaarummaafi hooggansa gaarii argateera
Akka ibsa bayeetti namoonni ari’aman dura taa’aa boordii baankichaa Dr. Abarraa Dheeressaa, Itti-aanaa boordii ob.Taaddasaa Masqalaa, prezidaantii baankichaa ob. Wondimaaganyehu Nagaraa fi itti aantota isaanii ob. Tolosaa Bayyanaafi ob. Abbabaa Xilahuun dha. Akkasumas daayireektara tajaajila baankii biyya alaa kan ta’an ob. Baantaayyehu Kabbadaa kanniin ari’aman keessa isa tokko.
Hoogganni kuni guutuun maaliif altokkoon ari’ame? Gaafii madda wolaba ta’e irraa hanaga ammaatti deebii hinarganneedha. Dhimmi sharafaafi daldala biyya alaa ari’amuu hoogganoota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatiif waan Baankiin Biyyoolessa Itoophiyaa akka sababaatti dhiyeesseedha. Sharafaafi daldalli biyya alaa dhimoota baankiin kamuu irratti hojjatuudha. Achi biratti maaltu akka bade ykn hir’ate Baankiin Biyyoolessa Itoophiyaa hinibsine. Maaliif akka ibsuus hinfeene wanti beekame hinjiru. Baankiin Biyyoolessa Itoophiyaa tankaarfii kana fudhachuuf seerri biyyattii isaaf ni hayyamaa inni jedhus gaafii nama hedduuti. Kanas ta’ee san gama miidiyaalee hawasaatiin yaanni garagaraa laatamaa jira. Hedduun namaa jechutti kan jiran kufaatii hooggana Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaatiif sababni guddaan guddinaafi milkii baankichaafi hoogganni kuni galmeessiseedha. Baankiin kuni yeroo gabaabaa keessatti akkas saffisaan guddachuufi injifannoo gurguddaa galmeessisuun isaa mootujmmaa hingammachiisne yaanni jedhu dhageettii argataa kan dhufe fakkaata.
Hoogantoonni baankii namoota sadarkaa biyyaatti maqaafi seenaa guddaa qabaniidha. Dr. Abarraa Dheeressaa, dura taa’aan boordii, itti aanaa minisitera qonna Itoophiyaa ture. Nama sadarkaa addunyaatti dhaabbilee addaddaa hoogganeefi qorannoo addaddaa geggeessaa tureedha. Kitaabaafi barruulee qorannoo 40 oli nama barreesseedha, Dr. Abarraa Dheeressaa. Ob.Taaddasaa Masqalaa ammo Gamtaa Qoteebultoota Buna Oromomiyaa 1999 kaasee nama hoogganeefi gamtaan kuni sadarkaa addunttatiis osoo hinhafin akka beekamuuf adda durummaadhaan nama hojjateedha.
Previous Oromo TV: BBC Afaan Oromoo
Next WAA SADI AFOOLA OROMOO KEESSAA